Liverpool Oo Wada-hadal Kula Jirta Daafaca Dhexe Ee Kooxda Tottenham Davinson Sanchez
Home Horyaalka Ingiriiska Liverpool oo Wada-hadal kula jirta Daafaca Dhexe ee Kooxda Tottenham Davinson Sanchez
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay qandaraas la gashay wakiilada daafaca dhexe ee kooxda Tottenham Hotspur Davinson Sanchez si uu ugu soo biiro Anfield.
Kooxda difaacaneysa Premier League ayaa lumisay labada xiddig ee Joe Gomez iyo Virgil van Dijk inta ka harsan xilli ciyaareedka, taasoo la micno ah in daafac cusub la filayo inuu yimaado Anfield sida ugu dhaqsiyaha badan marka dib loo furo suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Warbixin dhawaan soo baxday ayaa soo jeedisay in Merseyside Reds ay u aqoonsatay daafaca dambeedka dhexe ee RB Leipzig Dayot Upamecano inuu yahay bartilmaameedkooda suuqa kala iibsiga, si kastaba ha ahaatee, kooxaha Man Utd iyo Manchester City ayaa sidoo kale la sheegayaa inay ugaarsi ugu jiraan ciyaaryahanka reer France.
Sida laga soo xigtay wargeysyada Spain, Mersyeside Reds ayaa sidoo kale isha ku heysa daafaca dhexe ee reer Colombia waxayna durbaba xiriir la sameeyeen xiddiga reer Colombia si ay u diiwaangeliyaan xiisahooda.
24 jirkaan ayaa 126 kulan u ciyaaray kooxda Jose Mourinho tan iyo markii uu ka yimid kooxda reer Holland, Ajax ayaa dib ugu soo laabatay 2017, si kastaba ha ahaatee, wuxuu si weyn ugu dhibtooday inuu boos joogto ah ka ciyaaro.
Previous articleMikel Arteta oo xaqiijiyay in Rob Holding uu qarka u saaran yahay inuu saxiixo heshiis cusub oo Arsenal ah
Next articleManchester United oo soo bandhigtay Qiimaha ay ku dooneyso Pogba